Masaajidada qaarkood ayaa sheegay in hanjabaado loo soo diray. Laakiin, ilaalada gaarka ah ee masaajidada iyo hay'addaha amniga maxaliga ah ayaa iska kaashanaya sugida amniga xilliyada habeenkii ee lagu tukanayo taraawiixda.
Waxaa dibadbaxa qeyb ka ahaa Jeylani Xuseen, oo ah madaxa laanta gobolka Minnesota ee ha’yadda CAIR oo ah hay’ad u doodda xuquuqda dadka Muslimiinta ah.
Cabduqaadir Maxamed Mursal iyo Cabdixakkim Maxamuud Shirwac ayaa noo haya warbixino arrintaas la xiriira.
Dhageyso Amniga Masaajidda